Soupy mupunga ne zucchini uye howa | Bezzia
Soupy mupunga ne zucchini uye howa
Maria vazquez | 09/05/2021 10:00 | Salads uye miriwo
Mudzimba zhinji tinotora mukana wekupedza svondo nekunakirwa semhuri. mabvazuva muto mupunga ne zucchini uye howa Ndiyo yekupedzisira yatakugadzirira muBezzia. Mupunga une muto une mukaka wakakwana.
Iyi mupunga inzira huru yekupedzisa menyu yevhiki. Wese munhu achakwanisa kunakidzwa nazvo; yakakodzera kudya kwevegan sezvo isingasanganisi chero chinhu chinogadzirwa nemhuka. Izvo zvakare zvakareruka kwazvo kugadzirira. Iwe unongofanirwa kutarisira kugadzirira yakanaka base sauce.
Anyanisi, mhiripiri, zucchini uye howa ndiwo musimboti wemuto uyu mupunga. Mupunga une kamukira kaunokwanisa kuchinjisa kuti utore mukana neakasara iwo miriwo auri kuda kuzoshatisa kumba. Zvinokutorera iwe anopfuura maminetsi makumi matatu kuti uigadzirire, unotsunga here? Uye kana iwe uchida musanganiswa wemupunga uye zucchini, usazeze edza iyi tajine mupunga.
1 Zvinongedzo zve4
2-3 mashupuni emafuta emuorivhi asina kuwanikwa
1 hanyanisi yakatemwa
1 zucchini, akachekwa
12 howa, hwakachekwa
1 mukombe wemupunga
3,5 makapu emuriwo muto
Pisa mafuta mupoto uye sunga anyanisi, mhiripiri uye zucchini kwemaminitsi gumi kusvikira nyoro.
Zvino, mwaka uye wedzera howa hwakatemwa. Sungai ivo kusvikira vatora ruvara.
Saka, wedzera tomato yakakangwa nokusanganisa.
Wobva wawedzera mupunga uye bika kwemaminetsi mashoma usati wawedzera iyo inovira yemuriwo muto uye turmeric.
Sanganisa iyo yese, vhara iyo casserole uye kubika pamusoro pepakati-yakanyanya kupisa mukati memaminitsi makumi maviri.
Tevere, vhura iyo casserole uye ramba uchibika mupunga kwemamwe gumi maminetsi kana kusvika wapedza.
Kuti upedze, bvisa kubva pamoto, uvhare nejira uye ugozorora kwemaminetsi mashoma.
Nakidzwa nemupunga ne zucchini uye howa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Salads uye miriwo » Soupy mupunga ne zucchini uye howa
Ungava sei munhu akura
Inditex inotangisa Zara Runako, zara nyowani yerunako brand